Buugga Bixiyaha - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Buugga Takhasuska
Dib u eeg faahfaahinta muhiimka ah, habraacyada, iyo ilaha kaa caawinaya inaad daryeesho xubnaha.
Adiga oo ah bixiye CHPW, waxaad ogolaatay inaad daryeel siiso xubnaheenna diiwaangashan. Waxaan rajeyneynaa inaan kaa taageerno bixinta adeeg caafimaad oo tayo leh oo daboolaya baahida bukaannadaada - xubnaheenna.
Buugga Bixiyaha waa kheyraad leh habraacyo, siyaasado, iyo tixraacyo kaa caawinaya. Buugga Bixiyaha ee 2021-ka waxaa ku jira dib-u-habeyn ku habboon, iyo sidoo kale wixii macluumaad cusub ah. Waxaan cusbooneysiinaa Buugga Bixiyaha sanad walba si aan uga tarjumno isbeddeladan.
Akhriso ama soo dejiso Buugga Bixiyaha 2021 adoo isticmaalaya xiriirka hoose.
Soo Degso Buugga Bixiyaha 2021
Waxyaabaha ugu Muhiimsan Buugga Bixiyaha
* Dhagsii + hoose si aad waxbadan uga akhriso mowduuc kasta.
Ogeysiiska Sannadlaha ee Isbeddelka
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington wuxuu sanad walba isbeddelo ku sameeyaa faa'iidooyinka loogu talagalay Qorshayaasheena Faa'iidada Medicare ee CHPW. Si aad u aragto isbeddelada dhaqan galaya Janawari 1, 2021, fadlan dib u eeg Ogeysiiska Sanadlaha ee Isbedelada (ANOC) dhammaan xulashooyinka qorshaha 2021.
note: Faa'iidada aragtida ayaa sii socota in lagu maamulo iyada oo loo marayo Qorshaha Adeegga Aragga (VSP), iyada oo xubnaheenna loo soo bandhigayo dhowr ikhtiyaarro ah si ay u helaan muraayadaha iyo muraayadaha indhaha ee aasaasiga ah ee ku jira qaddarka dheefaha ee loo oggol yahay qorshe kasta iyadoo la adeegsanayo Shabakadda Faa'iidada VSP ee bixiyeyaasha.
Si aad wax badan uga ogaato adeegyada guud ee la daboolay, adeegyada u baahan oggolaansho hore iyo qaddar wadaagga kharashyada ee qorshooyinka Faa'iidada Medicare, tixraac shabakadaha faa'iidooyinka xubinta.
Xuquuqda iyo Mas'uuliyadaha Bixiyaha
In si xushmad iyo ixtiraam leh loola dhaqmo xubnaheena.
Si aad u hesho macluumaad sax ah oo dhameystiran iyo taariikhda caafimaadka ee daryeelka xubnaha.
In laga filayo xubnuhu inay raacaan qorshooyinka daaweynta iyo borotokoolka.
Si aad u fayl garaysato cabasho ama aad u gudbiso rafcaan ka dhan ah CHPW iyo / ama xubin.
In la gudbiyo cabasho asaga oo ka wakiil ah xubin, iyada oo xubinta laga ogolaado.
Si loo helo barnaamijyada horumarinta tayada ee CHPW, oo ay ku jiraan yoolalka, geeddi-socodka,
iyo natiijooyinka laxiriira daryeelka iyo adeegyada xubinta.
In lala kaashado xirfadlayaasha kale ee daryeelka caafimaadka ee ku lugta leh daryeelka
Si aad marin ugu hesho Xiriir Bixiyaha iyo / ama Daryeelka Macaamiisha wixii su'aalo ah, arrimo iyo / ama
Ku wargeli xubnaha xuquuqdooda is-gudbinta ee adeegyada qaarkood.
U fidiyaan ama u diyaariyaan adeegyo turjubaan xubnaha maqalka naafada ka ah ama
oo afkiisa koowaad uusan aheyn Ingiriis.
Ka hel oggolaansho la ogeysiiyey xubinta ama qof loo oggolaaday inuu oggolaado
magaca xubinta, daaweynta ka hor.
La socodsiiso xubnaha xuquuqdooda inay gudbiyaan cabasho iyo sida loo sameeyo. Xaaladda a
cabashada xubinta ee la xiriirta adeegyada caafimaadka hab dhaqanka waxay bixisaa caawimaadda
Ombudsyada Caafimaadka Habdhaqanka ee gobolka xubinta uu deganyahay.
Ka faa'iideyso dhaqamada ku saleysan cilmi baarista shaqsiyaadka, oo ay ku jiraan kuwa wada jira
caafimaadka maskaxda iyo ogaanshaha ku tiirsanaanta kiimikada.
Sii xubnaha qaangaarka macluumaad qoran oo ku saabsan dardaaranka hore iyo kan saxda ah
in la sameeyo hadiyado jidh ahaaneed.
Ka caawi xubnaha helitaanka adeegyada daryeelka caafimaadka ee aan daboolin CHPW.
Waa inaan laga reebin ama laga cunqabateyn Xafiiska Kormeeraha Guud (OIG) iyo
Hay'adda Adeegyada Guud (GSA).
Hubi inay xubnuhu cod ku leeyihiin horumarinta qorshooyinka adeegga shaqsiyeed, hore u socodka
tilmaamaha iyo qorshooyinka dhibaatada. Tan waxaa ka mid noqon doona carruurta iyo qoysaskooda (tusaale daryeel bixiyeyaasha
iyo kuwo kale oo muhiim ah, waalidiinta, waaliddiinta korinta, waalidiinta loo xilsaaray / magacaabay, walaalaha),
iyo dadka waaweyn. Uguyaraan, yoolalka daaweyntu waa inay kujiraan ereyada qofka iyo
dukumiintiyada waa in lagu daraa diiwaanka bukaan socodka oo sharxaya sida shaqsigu wax u arko
horumarkiisa. Qorshaha Taakulaynta Shakhsi Ahaaneed waa lagu dari karaa ama lagu dari karaa
Qorshaha Adeegga Shakhsiyeed, ee loogu talagalay xubnaha qaata adeegyada caafimaadka hab dhaqanka.
Muuji dadaallada isku dubaridka daryeelka adeegyada dhibaatooyinka iyo nidaamyada kale ee xulafada la ah iyo
waxay leeyihiin hanaan lagu gudbinayo dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah hubinta sii wadida gaarsiinta
adeegyada caafimaad ahaan loo baahan yahay. Bixiyeyaasha ka faa'iideysta Medicare waa inaan laga saarin Medicare. Bixiyeyaasha leh
laga saaray Medicare waxaa laga yaabaa in shabakadda loo dhigo khadadka kale ee ganacsiga.
Xarummuhu waa inay ku wargeliyaan CHPW dhammaan oggolaanshaha bukaan-jiifka qaab wakhti ku habboon sida lagu sharraxay
qaybta “Maareynta Daryeelka” ee buug-gacmeedkan, oo ah shuruud ah bixinta. Bukaan jiifka
iyo adeegyada gurmadka waa in la helaa 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii. Aqbal lacag bixinta si buuxda oo ha ka codsanin bixinta adeegyada la daboolay xubinta.
Si aad u hesho barnaamijka Tababbarka Biilasha ee Xubinta / Miisaanka ee CHPW, booqo Khayraadka Bixiyaha .
Xaqa inaad dib u eegis ku sameyso macluumaadka lagu taageerayo arjiga
Bixiyeyaasha kujiray ama kujira howsha aqoonsiga ee CHPW waxay xaq u leeyihiin inay dib u eegaan macluumaadka aqoonsiga ee la soo aruuriyay inta lagu gudajiray aqoonsiga, dib u aqoonsiga iyo howlaha dib u eegista socda. Bixiyeyaasha waxaa lagu ogeysiiyey xuquuqdan warqadda daboolka ah ee la socota aqoonsiyada iyo dib u aqoonsashada CHPW.
Warqadda daboolka waxay sharraxaysaa ujeeddada hawsha iyo tallaabooyinka bixiyaha ay tahay inuu qaado si dib loogu eego macluumaadka la soo ururiyay. Ogeysiiskan waxaa sidoo kale loo fidiyay bixiyaha iyada oo qayb ka ah Buuggan Bixiyaha.
Xaq u leeyahay inuu saxo macluumaadka khaldan
Haddii macluumaadka lagu bixiyay arjiga uu yahay mid aan waafaqsanayn macluumaadka laga helay xaqiijinta asalka aasaasiga ah, Khabiirka Aqoonsiga ee CHPW ayaa u soo diraya bixiyaha ogeysiis qoraal ah oo ku saabsan is khilaafsanaanta waxayna codsan doonaan caddeyn rasmi ah.
Ogeysiiska waxaa ku jiri doona soo koobida macluumaadka aan iswaafaqsaneyn iyo codsi ah in jawaabta bixiyaha lagu soo celiyo afar iyo toban (14) maalmood oo shaqo gudahood. Ogeysiiska waxaa loo diri doonaa si elektiroonig ah ama caddeyn soo celin ah oo la codsado waxaana waraaqaha loo calaamadeyn doonaa "Qarsoodi" sida ay khuseyso.
Bixiyuhu kuma sameyn karo wax sixitaan ah dalab horay loo soo gudbiyay loona caddeeyay inuu sax yahay oo dhameystiran yahay. Si kastaba ha noqotee, adeeg bixiyuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu soo gudbiyo dheeri si loo saxo macluumaadka khaldan ee ay soo gudbiyeen dhinac kale. Haddii la doorbido, adeeg bixiyuhu wuxuu ku dari karaa sharraxaadda macluumaadka khaldan ee ku saabsan codsigiisa ama codsigeeda, oo ay ku jiraan qoraal saxeexan oo taariikhaysan oo caddaynaya saxsanaanta macluumaadka la bixiyay, ka dibna ku soo celinaya macluumaadka Khabiirka Aqoonsiga ee CHPW.
Xaqa in lagugu wargeliyo xaaladda dalabka
Bixiyeyaashu waxay codsan karaan dib u eegis feylkooda aqoonsiga iyagoo wacaya Maamulaha Aqoonsiga (206) 613-8951 inaad ballan qabsato. Dhammaan dib u eegista waa in lagu sameeyaa goobta ka socota xafiiska CHPW. Maamulaha Aqoonsiga ama xubin ka tirsan Kooxda Aqoonsiga ayaa la socon doona bixiyaha inta lagu jiro dib u eegista faylka.
Dukumiintiyada la heli karo si dib loogu eego waa:
Waxyaabaha uu soo gudbiyay codsadaha
Macluumaadka Caymiska Khaldan
Macluumaadka gudiyada shatiga
Jawaabta weydiinta Ururka Caafimaadka Mareykanka (AMA) ama Ururka Osteopathic Association (AOA)
Dukumintiyada dib-u-eegista asxaabta, tixraacyada ama macluumaadka kale ee dib-u-eegista asxaabta la ilaaliyo lama wadaagi doono codsadaha. CHPW looma baahna inay muujiso ilaha macluumaadka ee aan la helin si ay ula kulanto shuruudaha xaqiijinta isha aasaasiga ah, ama marka sharcigu mamnuucayo shaacinta. Marka la codsado, CHPW waxay siin doontaa adeeg bixiyaha xaaladda codsigiisa ama codsigeeda. Bixiyeha ayaa lagu wargeliyay xuquuqdan markii isaga ama iyadu ay helaan warqadda daboolka ee la socota Codsiga Aqoonsiga iyo Dib-u-aqoonsiga ee CHPW.
Bixiyaha ayaa laga yaabaa inuu la xiriiro Khabiirka Aqoonsiga wixii macluumaad ah ee ku saabsan heerka arjigooda aqoonsiga. Khabiirka Aqoonsiga ayaa kuu sharxi doona halka arjigu ka socdo hawsha. Khabiirka Aqoonsiga wuxuu la wadaagi karaa bixiyaha macluumaad kale oo la ogolyahay oo ku saabsan codsigiisa ama codsigeeda.
note: Xusuusin ahaan, inta adeeg bixiyaha uu kujiro howsha aqoonsiga, adeeg bixiyaha ma siin karo adeegyada daryeelka caafimaadka xubnaha CHPW. Sheegashooyinka waa la diidi doonaa haddii adeeg bixiyuhu uusan dhammaystirin nidaamka aqoonsiga.
Helitaanka Diiwaanada iyo Macluumaadka Caafimaadka Xubinta
Bixiyuhu waa inuu u oggolaado gelitaanka macquulka ah ee diiwaannada maaliyadeed, diiwaannada caafimaadka, iyo wixii kale ee diiwaanno ah ee la xiriira Heshiiskooda Bixiyaha ee wakiillada idman ee CHPW, Bixiyeyaasha, iyo hay'adaha gobolka / federaalka ee leh hay'adda ku habboon. Helitaanka diiwaannada noocan oo kale ah waa inay ahaadaan illaa inta sharcigu oggol yahay isla markaana loo baahan yahay si loo buuxiyo shuruudaha Heshiiska Bixiyaha, qandaraasyada gobolka iyo federaalka ee CHPW, iyo shuruudaha sharci iyo aqoonsi.
Bixiyuhu wuxuu u oggolaan doonaa CHPW inay sameyso xisaab hubin ah oo ku saabsan diiwaanada caafimaadka xubinta ee adeegyada la daboolay ee lagu bixiyo Heshiiskooda Bixiyaha. Kormeerka noocan ah, xisaabinta, iyo soo-saarista diiwaanada waa loo oggolaan doonaa ogeysiis macquul ah inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah.
Bixiyeyaashu waxay xaq u leeyihiin marin macquul ah oo ay ku helaan CHPW sheegashooyinka lacag bixinta iyada oo ujeedadu tahay in ay hubiyaan taariikhdooda lacag bixinta iyo sheegashada diidmada ee waafaqsan WAC 284-43-324. Bixiyuhu wuxuu ilaalin doonaa dhammaan macluumaadka xubinta iyadoo la waafajinayo Heshiiskooda Bixiyaha iyo sharciyada iyo qawaaniinta gobolka iyo federaalka ee khuseeya. Macluumaadka xubinta waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, diiwaannada caafimaadka, sheegashooyinka, dheefaha, iyo macluumaadka kale ee caafimaad ama maamul ee shakhsi ahaan xubinta looga aqoonsan karo.
Amniga Xogta Caafimaadka
CHPW iyo adeeg bixiyahu waa inay mid waliba horumariyaan, hirgeliyaan, ilaaliyaan, oo ay adeegsadaan ilaalin maamul, farsamo, iyo mid jireed oo si macquul ah oo ku habboon u ilaalinaysa sirta, sharafta, iyo helitaanka macluumaadka caafimaad ee xubin kasta oo xubin ka ah. Tani waxay khuseysaa dhammaan qaababka ay CHPW ama adeeg bixiyaha abuuraan, helaan, hayaan, ama u gudbiyo gudashada waajibaadka hoosta Heshiiska Bixiyaha si loo ilaaliyo nabadgelyada xubinta, iyo asturnaanta iyo amniga macluumaadka caafimaad ee xubinta la ilaaliyo.
Dheeraad ah, CHPW iyo bixiyaha waa inay ka ilaaliyaan dhammaan macluumaadka caafimaad xubinta oo ay ku jiraan warqadda iyo / ama diiwaanka caafimaadka elektiroonigga ah ee lidka, luminta, xatooyada, faragelinta, iyo isticmaalka shakhsiyaadka aan loo igman.
Heerarka Dukumintiga Diiwaanka Caafimaadka
Bixiyuhu waa inuu dhisaa oo ilaaliyaa diiwaanka caafimaad ee xubin kasta oo ka tirsan CHPW inta xubintu tahay bukaan firfircoon. Haddii xubintu noqoto bukaan aan firfircooneyn, diiwaanka caafimaadka waxaa loo wareejin karaa keydinta. Bixiyaha waa inuu hayaa oo hayaa diiwaanka caafimaadka toban (10) sano. Tan waxaa ku jira dhammaan diiwaanada caafimaadka, filimada raajada, tijaabooyinka unugyada, bogagga, iyo sawirrada ay leeyihiin milkiilaha. Dhammaan qoraallada ku saleysan warqadaha, warbixinnada, iwm ee diiwaanka caafimaadka waa in lagu hubiyaa galka xubinta ama si elektaroonig ah ugu lifaaqan faylka / diiwaanka xubinta.
Diiwaanka caafimaadka xubin firfircoon waa in lagu hayaa xafiiska daryeel bixiye kasta. Haddii xubinku noqdo bukaan socod aan firfircooneyn, diiwaanka caafimaadka waxaa laga yaabaa in laga ilaaliyo goobta. Diiwaanada waa inay ahaadaan kuwo si fudud dib loogula soo bixi karo. Dhammaan diiwaannada caafimaadka, ee firfircoon iyo kuwa aan firfircooneyn, waa in lagu keenaa 30 maalmood gudahood laga bilaabo marka ay codsadaan CHPW. Codsiyada degdegga ah waa in lagu fuliyaa iyadoo loo eegayo xaaladda caafimaad.
Bixiyuhu waa inuu u hoggaansamo dhammaan sharciyada iyo qawaaniinta federaalka, gobolka, iyo deegaanka ee khuseeya diiwaanada caafimaadka iyo codsiyada diiwaanka caafimaadka. Dhammaan macluumaadka diiwaanka caafimaadka waa inay sii daayaan oo keliya shaqaale tababaran oo keliya oo la buuxiyo lana saxeexo HIPAA Foomka Oggolaanshaha Bukaanka ee Bixinta Macluumaadka.
Ka Warbixinta Isbedelada Macluumaadka Bixiyaha
Dhammaan bixiyeyaasha CHPW waa inay siiyaan ogeysiis CHPW ugu yaraan lixdan (60) maalmood kahor adeeg bixiye kasta
isbeddellada ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn:
NPI (Aqoonsiga Bixiyaha Qaranka) lambarka (shaqsi iyo / ama koox)
Cinwaanka biilasha (iibiyaha), xafiiska, iyo lambarrada fakiska fakiska ah
Macluumaadka xiriirka rugta (magaca, lambarka taleefanka, fakiska, iyo emaylka) –ie, Isuduwaha Aqoonsiga, Maareeyaha Biilasha, Maareeyaha Xarunta Caafimaadka)
Ku darida bixiyeyaasha (ku dar taariikh bixiyaha wax ku oolka ah)
Isbedelada goobaha bixiyaasha ee kooxda dhexdeeda
Joojinta bixiyaha (oo ay ku jiraan taariikhda joojinta bixiyaha)
Kiliinikada / goobta ku darista / isbeddelada (haddii ay khuseyso, ku dar taariikhaha waxtarka iyo joojinta ee rugtaada caafimaad iyo / ama xarunta)
60-maalmood Ogaysiiska Hordhaca ee isbeddelada wuxuu siin doonaa CHPW waqti ku filan oo lagu cusbooneysiiyo dhammaan nidaamyada, loo ogeysiiyo xubnaha, loogana hortago sheegashooyinka bixinta lacag-bixinta. Isbedelada Bixiyaha iyo kooxda waa in lagu soo wargeliyaa CHPW iyaga oo dhammaystiraya Foomka Isbaddalka Bixiyaha Bixiyaha (PACT) iyo / ama Xarun Caafimaad iyo Foom Isbeddelka Kooxda (oo laga heli karo bogga Foomamka iyo Qalabka Adeegyada ee boggayaga internetka. ku [emailka waa la ilaaliyay]. Adeeg bixiyeyaasha cusub ee u baahan aqoonsiga, fadlan codsi ugu soo dir [emailka waa la ilaaliyay].
Kooxaha fidiya aqoonsiga ee loo wakiishay, fadlan tixraac oo raac heshiiskaaga aqoonsiga ee aqoonsiga. Kooxaha bixiya aqoonsiga ee loo wakiishay waa inay ku soo gudbiyaan cusboonaysiinta bixiyaha iimayl ahaan [emailka waa la ilaaliyay].
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Febraayo 18, 2021